आँप खेती कसरी गर्ने ? ९ टिप्स्
आँपलाई फलको राजा मानिन्छ। वैद्धिक शास्त्रमा यो फललाई अमृत भनेर उल्लेख गिरिएको छ। आयुर्वेदीय दृष्टिले पनि आँप महत्वपूर्ण फल हो। काँचो वा पाकेको दुवै प्रकारको आँपमा औषधीय गुण रहेको हुन्छ। आयुर्वेद विज्ञानका अनुसार पाँकेको आँप स्वादिष्ट हुनुका साथै वीर्यवर्द्धक, वायुनाशक, कान्तिदायक, शीतल र पित्तनाशक हुन्छ।
आँपको सेवनले भोक पनि बढ्ने गर्छ। यसले मुटुलाई बलियो बनाउनुको साथै पित्तलाई नियन्त्रणमा ल्याउने काम गर्छ। आँप कफवर्धक पनि मानिन्छ। आँप म्यांगिफेरा वर्गमा पर्ने तथा उष्ण हावापानी भएको स्थानमा हुर्कने एक प्रकारको गुलियो तथा अमिलो फल हो। यसको रूख अत्यन्त उपयोगी, दीर्घजीवी, सघन तथा विशाल हुन्छ। आँप नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिम तथा दक्षिणको तराई देखि पहाड (३,००० फुटको ऊँचाइ सम्म) हुन्छ।
मौसम र स्थान : म्यांगीफेरा वर्गमा पर्ने आँप उष्ण हावापानी भएको स्थानमा हुर्कने फल हो। आँपको रुख उपयोगी, दीर्घजीवी र विशाल हुन्छ। आँप नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्मका तराई क्षेत्रदेखि पहाडी क्षेत्रको ३ हजार फिटसम्मको उचाइमा पाइन्छ। अनुकूल मौसम भएको खण्डमा आँपको रुख ५० देखि ६० फिटसम्म अग्लो हुन्छ।
आँप उष्ण प्रदेशीय फल भए पनि समशीतोष्ण हावापानीमा पनि यसको खेती गरिएको पाइन्छ। गरम, सुख्खा र बढी प्रकाश आउने स्थानमा आँपको खेती गर्नु उत्तम हुन्छ। आँप खेतीका लागि २४ देखि २७ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम अनुकूल मानिन्छ तर ४८ डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रममा पनि यसको खेती गरिएको पाइन्छ।
आँपलाई २५ देखि २५० सेन्टिमिटर वार्षिक वर्षा हुने स्थान उपयुक्त हुन्छ। आँपको बिरुवा रोप्दा सामान्यतया १० देखि २० मिटरको फरकमा रोपिन्छ। माटोको पि.एच. मान ५.५ देखि ७.५ सम्मको हुनुपर्छ। क्षारीय र लवणयुक्त माटो आँपलाई राम्रो हुँदैन। आँपको बिरुवा रोप्दा सामान्यतया १ बाई १ घनमिटरको खाल्डो खन्नु पर्छ। यसले गर्दा जमिनमा भएका सानातिना ढुंगा गेग्रान हटाउन र बिरुवालाई बुरबुराउदो माटो त्यस स्थानमा राखिदिँदा आँपको कलिलो बिरुवाका जराहरू फैलिन सहज हुन्छ।
सिचाई : आँपको रुखलाई सिँचाइको अत्यन्तै आवश्यकता हुन्छ। नयाँ बिरुवा रोप्ने बित्तिकै एक दुई वर्षसम्म प्रत्येक सुख्खा मौसममा २ वा ३ दिनको फरकमा सिँचाई गरिरहनु पर्छ। बिरुवाको उमेरसँगै सिचाई गर्ने अवधिलाई बढाउँदै लैजानु पर्छ।
मल खाद : आँपलाई रुखको उमेर अनुसार खाद्यतत्वको मात्र फरक पर्दै जान्छ। आँप खेतीका लागि विज्ञहरूले एक वर्षे बिरुवाका लागि ५ केजी कम्पोस्ट मल, १०० ग्राम नाइट्रोजन, ५० ग्राम फस्फोरस, १०० ग्राम पोटास सिफारिस गरिएको हुन्छ। त्यस्तै त्यही आँपको रुखलाई १० वर्षपछि ५० केजी कम्पोस्ट मल, १ केजी नाइट्रोजन, ५०० ग्राम फस्फोरस र १ केजी पोटास सिफारिस गरिएको हुन्छ।
उपयुक्त आँपका प्रकार : आँपका धेरै प्रकारको खेती नेपालमा हुन्छ। तर यी धेरै जातका आँपमध्ये पनि नेपालमा मालदह, दशहरी, बम्बै ग्रिन, बम्बै यल्लो, जर्दालु, अल्फान्सो, आम्रपाली लगायतका जातका आँपको खेती धेरै गरिन्छ।
छिटो पाक्ने आँप : जात अनुसारका आँप पाक्ने समयावधि पनि फरक फरक हुन्छ। नेपालमा फल्ने आँपहरूमा बम्बै, जर्दालु, कृष्णभोग, अल्फान्सो जातका आँपहरू चाँडै पाक्छन्। यी आँपहरू जेठ महिनादेखि नै पाक्न थाल्छन्।
आँप टिप्ने समय : आँप टिप्ने समय भएको थाहा पाउन एकदमै सजिलो छ। फलेको आँपको आकारमा हुने परिवर्तनसँगै त्यसको रंगमा पनि परिवर्तन देखिन्छ। आँप परिपक्व भएपछि गाढा हरियो रंगबाट फिक्का हरियो रंगमा बदलिन्छ। आँपको रंग फिक्का हरियो भएपछि टिप्न फल उपयुक्त हुन्छ।
आँप छिटो पकाउन के गर्ने ? : फिक्का हरियो रग भएको आँप न्यानो र प्रकाश नआउने स्थानमा राख्दा आफै पाक्छ। तर अलि चाँडो आँप पकाउनु पर्ने छ भने त्यसरी राखिएको आँपमा २५० पिपिएमको इथरेल छर्केर वा टोकरीको तल सुरक्षित रुपले कार्बाइड राखेर ५ देखि ७ घण्टा राख्दा आँप चाँडै पाक्छ।
किरा : आँपको सबैभन्दा ठूलो शत्रु कीरा फड्के अर्थात् म्यांगो होपर हो। फूल फुल्ने बेला यो कीराले फूल नष्ट गर्ने जोखिम अत्याधिक हुन्छ। यो कीराको प्रकोपबाट आँपलाई जोगाउन फूल फुल्नु अघि र चिचिला लागिसकेपछि विज्ञको सल्लाह अनुसार मेटासिष्टक्स लगायतका विषादीको प्रयोग गर्नु पर्छ।
आँप एक वर्ष बिराएर किन फल्छ ?
प्राय आँप एक वर्ष बिराएर मात्रै फल्ने गर्छ। आँप यसरी फल्नुमा जातीय गुण। हावापानी वा व्यवस्थापनको कारणले पनि हो। तर हाल विकसित गरिएका आम्रपाली, मल्लिका जस्ता केही आँपहरू वर्षैपिच्छे नै फल्छन्।
Tagsआँप खेती टिप्स्
पारिवारिक समृद्धिका लागि १० वास्तु टिप्स